ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း
ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတံုး on Mar 1, 2012 in Editor's Notes, Myanmar Gazette | 188 comments
ဂေဇက်မှာ မန်ဘာဝင်ထားသူပေါင်း ၇၀၀ဝ ကျော် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ကျနော် တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ထဲမှာ ဂေဇက် မန်ဘာ ၁၃ဝ လောက်ပဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျနော် သိသလောက် တွေ့မိသလောက်သာ စာရင်း ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ဒီစာရင်းထဲ မပါတဲ့သူများလည်း အောက်က ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးသွားပါ့မယ်။ (အနည်းဆုံး ပို့စ် (၁) ပုဒ် တင်ပြီးသူ ဖြစ်ပါက ပိုကောင်းပါမည်။) ပြီးတော့လည်း ကျနော့်အနေနဲ့ အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလို့ ရနိုင်တဲ့ နာမည်ကို မြင်ရုံနဲ့ သူ့ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ် ကို ရှာဖွေဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ်ကိုပါ တစ်ခါတည်း ပြောပေးခဲ့စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ကျနော့်ရဲ့ မန်ဘာလင့်ခ်ဟာ http://myanmargazette.net/author/anzartone ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျား/မ ခွဲခြားထားတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျနော် သိသလောက်သာ ဖြည့်ထားပြီး အချို့သော နာမည်တွေကိုတော့ ကျားမှန်း မမှန်း မသိလို့ “မသိ” ဆိုပြီး ဖြည့်ထားပါတယ်။
ဂေဇက် မန်ဘာများ စာရင်း (New Version)
စဉ် အမည် (ကြည့်ချင်ရင် ကလစ်နှိပ်ပါ) ကျား၊ မ
1 Kai (သူကြီး၊ သဂျီး) ကျား
2 AKKO၊ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ကျော်ဦး ကျား
3 Akswe၊ အဘဆွေ ကျား
4 Alinsett ၊ အလင်းဆက် ကျား
5 Amatmin ၊ အမတ်မင်း ကျား
6 Antimoe ၊ အန်တီမိုး မ
7 Ariyathitsa ၊ အရိယသစ္စာ မသိ
8 Asiamasters ကျား
9 Aung MoeThu ၊ အောင်မိုးသူ ကျား
10 Aungnng87 ကျား
11 Aung Naing Lin ကျား
12 Awra-Cho မသိ
13 Aye.kk ၊ အန်တီအေး မ
14 Ba Gyi ၊ ဘဂျီး ကျား
15 Bid Defender ကျား
16 BigBird ၊ ကိုငှက်ကြီး ကျား
17 BigChef ကျား
18 BlackChaw ၊ ဦးဘလက်ချော ကျား
19 BlackLover ကျား
20 Blue Rose မ
21 BuGyi ကျား
22 Burma ကျား
23 Burmese Or Chinese ကျား
24 Char Too Lan ၊ ချာတူးလန် မ
25 Chat Su မသိ
26 Chit Yim Htoo ၊ ချစ်ရင်ထူး ကျား
27 Comegyi ၊ ကမ်းကြီး ကျား
28 Computer မသိ
29 DaKaRa ၊ ဆရာသစ် ကျား
30 David ၊ ဒေးဗစ် ကျား
31 Deparko Deparko ၊ ဒီပါကို ကျား
32 Diamond Key ၊ ဦးစိန်သော့ ကျား
33 Eain Soe May မ
34 Eros ကျား
35 ET ကျား
36 Etone ၊ မအိတုံ မ
37 Fatty ၊ ဦးဖက်တီး ကျား
38 FattyCat ၊ ကိုကြောင်ဝတုတ် ကျား
39 Foreign Resident ၊ အဘဖော ကျား
40 Frank Soolar ကျား
ဒီစာရင်းထဲ မပါတဲ့သူများလည်း အောက်က ကွန်မန့်ထဲမှာ ပြောထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။ ကျနော် ထပ်ပြီး ဖြည့်ပေးသွားပါ့မယ်။ ပြီးတော့ ကျား/မ ခွဲခြားထားတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျနော် သိသလောက်သာ ဖြည့်ထားပြီး အချို့သော နာမည်တွေကိုတော့ ကျားမှန်း မမှန်း မသိလို့ “မသိ” ဆိုပြီး ဖြည့်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာကတော့ “မထင်ရှား” ဆိုတာ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ကို ဆိုလိုတာပါ … ( အဟီး .. ဒါက သူရို့ကို နောက်ထားဒါပါ .. )
ဒီထက်တော့ ပြောတတ်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ဒါပါပဲလို့ …
အမည်၊ Click (View all posts)
AKKO ၊ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ကျော်ဦး
ariyathitsa ၊ အရိယသစ္စာ
ဘလက်ချော၊ ကိုဘလက်၊ ကိုချော၊ ကိုချောကလက်ကြီး၊ ဘဘဘလက်၊ ကိုကြီးဘလက်၊ ကိုဘချော
chatsu ၊ ချက်စု
DaKaRa (ဆြာသစ် (ဒုနိမ်းမ်))
ထက်ဝေး၊ ဆရာထက်ဝေး၊ ဆေးဆရာ
ကျား (မိဘုရား လေးယောက်ရှိဟုဆို)
photwenty ၊ ဖိုးတွမ်တိ
Sandy ၊ ဆြာမလေး
Thaw Zin Loikaw ၊ သော်ဇင် (လွိုင်ကော်)
ကိုပေါက်၊ လေးပေါက်၊ လောက်လောက်ပေး
ခပ် King ကင်း
အံစာတုံး၊ မဟာရာဇာ အံစာတုံး
ရင် နင့် အောင်
ကျား သို့မဟုတ် ကြောင်
ရွှေ မင်း သား
ဟိန်း ဝင်း (ထားဝယ်သား)
captainAmerica ၊ အမေရိကန်ငတုံး
အော့ကြောလန်နန့်နန့်ထိုး ခွေးလယားသီး ဗြားကြီး
အင်ဇာဂီ၊ ကိုဂီ၊ ဂီဂီ
ကျား ၊ နျူးဘာ
( ပန်ကြားချက် ။ ။ ကျနော် အခုလည်း မန်ဘာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်ပေးနေပါတယ်။ အချို့သော ဂေဇက်မှ မန်ဘာ နာမည်များမှာ ရှာရခက်ပါသည်။ သို့ကြောင့် နောက်ဆုံးတင်ခဲ့သည့် ပို့စ်၏ အမည်ကို ဖြစ်စေ၊ ဂေဇက် လင့်ကို ဖြစ်စေ၊ အမည်ကိုဖြစ်စေ ပြောပြစေချင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဆိုရလျှင် ကျနော် အံစာတုံး (anzartone) ၏ ဂေဇက် လင့်မှာ http://myanmargazette.net/author/anzartone ဖြစ်ပါသည်။ )
ထပ်မံ ဖြည့်စွက်တာတွေကို အက္ခရာစဉ် ပုံစံထဲမှာပဲ ထည့်လိုက်ပါတယ် … ။ အရင်ပုံစံထဲမှာ မထည့်တော့ပါကြောင်း ….။
ဪ……. ရေမျေ့သဏင်းဆိုတာ 2009လောက်ထဲကရှိတဲ့ လူတလုံးလား အဲ့ဒီခေတ်တုံးက ဘရုတ်တို့ လူမင်းတို့ရော… ???
ဒါဂျီးက ဘာလို့ ပြန်ပေါ်လာရဗျန်ဒါဒုံး …
မသိခြင်ထောင် ထောင်နေပါတယ်ဆိုနေမှ …
ဒီလူဒွေနဲ့တော့ ဒုတ်စွ … ဒုတ်စွ …
ငါ့ဒေါ့ မပါတဲ့လူတွေက ဝိုင်းဗျင်းတော့မှာဘဲ … အမြန်လစ်မှ .. ဝှစ် ..
veryloveman , ကျား, ပရဟိတစိတ်ဓာတ်